Puerto Rico - Fifanarahana amin'ny toetr'andro | Fiaretana haran-dranomasina
Puerto Rico - Fifanarahana amin'ny toetr'andro
Ny vatohara momba ny toetrandro sy ny fitantanan-dranon-drano mampiasa ny fitaovana famolavolana fampifangaroana any Guánica Bay Watershed, Puerto Rico
Valan-dranon'i Guánica Bay sy ny vatohara mifanila, Puerto Rico, Etazonia
Ny vatohara any Puerto Rico. Sary © Kemit-Amon Lewis
Ny fiovan'ny toetrandro dia antenaina fa hisy fiantraikany ratsy amin'ny rano ara-pahasalamana sy ny rano avy amin'ny haran-dranomasina amin'ny lafiny maro any atsimo andrefan'i Rico. Ireo fiovana ireo dia mety hanangona ny fahapotehana ny tontolo iainana sy ny ho avy. Ny hetsika fitantanana ireo haran-dranomasina izay heverina na ampiharina hatreto dia tamin'ny ankapobeny no nifantohana tamin'ny setroka sy teo amin'ny toerana teo an-toerana nefa tsy nampidirina ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro. Mampalahelo fa ny hetsika fitantanana natao mba hiatrehana ny toe-java-misy ara-tantara dia mety tsy tanterahina araka izay nokendrena tamin'ny fiovan'ny toetr'andro, ary na dia ny fiheverana ho laharam-pahamehana ho an'ny fampiharana aza dia azo ovaina amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Araka izany, ny fanamby dia amin'ny fomba ara-teknika sy mangarahara ny famolavolana làlan-dranomasina mahay sy ny fitantanana ny vatohara.
The Adaptation Design Tool (Ny Fitaovana) dia manampy ireo mpitantana ny haran-dranomasina ny fampidirana ny endrika mahomby amin'ny toetrandro ao anatin'ireo hetsika fitantanana azy ireo amin'ny alàlan'ny fijerena ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro amin'ireo mpitan-tsaina ara-tontolo iainana sy ny fiantraikany amin'ny fitantanana mahomby. Ny Design Design dia ahitana hetsika maromaro (jereo ny sary eto ambany) miaraka amin'ireo takelaka ampiasaina (a) mamaritra ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fahombiazan'ny hetsika fitantanana anao ary diniho hoe inona ny fanovana tokony hatao amin'ny fihetsika mifototra amin'ireo fiantraikany ireo, ary (b) fantaro ny elanelana ao anatin'ny drafitra efa misy ary ny fihetsika vaovao misahana ny atidoha hamenoana ireo elanelana ireo.
Ny tabilaon'ny alàlan'ny Adaptation Design Tool dia mampiseho ireo hetsika ao amin'ny Design Design sy ny fandrosoana amin'ny hetsika fitantanana mahomby momba ny toetr'andro (avy misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovana famolavolana fampifanarahana: Arintany sy drafitra fananganana toetr'andro).
Hetsika mialoha ny fitantanana
Mba hiomanana amin'ny fampiasana ny fitaovana famolavolana Adaptation, ny ekipan'i Puerto Rico dia tsy maintsy nanapa-kevitra hoe inona ny hetsika fitantanana no tokony hifantohana. Mba hanaovana izany dia nanangona ny lisitr'ireo mety ho fampandehanan-drano sy ny fitantanana haran-dranomasina avy any amin'ireo loharanom-baovao maro izy ireo: ny drafi-pitantanan-drano teo aloha (Centre for Watershed Protection 2008), atrikasa sy sehatra forum, ary fifanakalozan-dresaka amin'ireo tompon'andraikitra misahana ny rano. Ity lisitra farany ity dia misy hetsika manokana sy manaja ny fahasalaman'ny haran-dranomasina ary mora tohina ny fiovan'ny toetr'andro, mahatratra ny hetsika 40. Tamin'ireo dia hetsika 12 no nofidina. Ireo hetsika ireo dia voafidy satria misy ny fampahalalana ampy, misy ny tombotsoan'ireo mpanelanelana Guánica, ary tsy ilaina ny hanaovana ny fanombanana ny vatohara mialoha ny tetikasa. Valo valo no nifantohana tamin'ny fahasalamana ara-drano, roa nifantoka tamin'ny toeram-ponenana ny morontsiraka, ary ny roa nifantoka tamin'ny vondron-dranomasina.
Taorian'izay dia niasa tamin'ny alàlan'ny Activity 1 an'ny Tool Design ho an'ny hetsika fitantanana 12 ny ekipa. Ho an'ity andiam-piasana ity, ny mpikambana iray ao amin'ny ekipa dia nanangona loharano voalohany, niresaka tamin'ny manam-pahaizana ilaina, ary namita ny takelaka ho an'ny hetsika tsirairay. Ity dia tokony ho ora 3-4 ora isaky ny hetsika, ary ora vitsivitsy no nandaniany ny hetsika nandritra ny volana vitsivitsy rehefa nahazo fampahalalana bebe kokoa. Ny takelaka dia manarona lohahevitra manaraka ireto:
Ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fihenjanana
Fandaharana amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Ny fiantraikan'ny fiatraikany amin'ny adin-tsaina sy ny fotoana iasan'ny vokatra ho an'ny metrika fahombiazana sy ny fomba fandrefesana azy ireo
Ny fiovana amin'ny fahombiazan'ny hetsika fitantanana noho ny: fiantraikan'ny toetrandro amin'ny tsindry kendrena
Fiovan'ny fahombiazan'ny hetsika fitantanana noho ny: fiantraikany amin'ny toetr'andro amin'ny hetsika fitantanana
Fotoam-potoana na fanerena hampiasana ny hetsika
Fanovana inona no ilaina mba hampifanarahana ny hetsika
Hetsika fitantanana manavao
Ny ankamaroan'ny hetsika mifototra amin'ny rano dia mitovy amin'ny worksheet 1A (satria ny fiovan'ny toetr'andro amin'ireo mpifaninana kendrena dia mitovy) saingy navadika ho an'ny worksheet 1B. Taorian'ny fanatanterahana ny hetsika 1, famoahana fanampiny fanampiny 1 (data gaps / information ilaina) dia vita amin'ny hetsika rehetra. Nahatonga "tapaka henjana" izany tamin'ny fampiasana ny Fitaovana Design satria ny fanamafisana ny fametrahana hetsika marobe amin'ny alàlan'ny fanatrarana ny antsipiriany amin'ny hetsika vitsivitsy. Nizara ny «tapaka henjana» izahay niaraka tamin'i Ridge to Reefs (RtR) sy Protectores de Cuencas (PdC), ireo fikambanana miasa amin'ny drafi-pitantanana misy rano nohavaozina. Ireo fikambanana ireo dia afaka misafidy izay asa fitantanana mahomby momba ny toetrandro tiany hotanterahina (Dingana 5 ny fihodinan'ny fiaran-tsaina).
Taorian'ny fahavitan'ny "tapaka tapaka", ny hetsika 12 dia natolotra tamina famintinana famintinana izay nahitana: ny hetsika fitantanana tany am-boalohany sy ny kendren'ny lasibatra, ny fiovan'ny toetrandro ho an'ny mpandeha lavitra, ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fitantanana hetsika (mivantana sy tsy mivantana), nohavaozina ny hetsika fitantanana mahomby momba ny toetrandro sy ny fanondroana fanavaozana. Na dia tsy manadino ireo fampahalalana manan-danja be dia be aza izahay mandritra ny "fahatapahana henjana" dia mora kokoa izy ireo ho an'ny fifandraisana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra.
Ny dingana manaraka dia ny "tapaka be", nantsoina satria vitsy ny hetsika noheverina tamin'ny antsipirihany kokoa nandritra ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny andiany roa amin'ireo manam-pahaizana momba ny lohahevitra nofidin'ireo mpikambana ao amin'ny tetikasa. Izany dia ho fanomanana ny fampiharana fampiharana manokana. Andiana vondrona manam-pahaizana efatra no nampiasa ny Fitaovana momba ny riandrano "Ampiasao ny fanodinana rano sy ny fampihenana ny fikorianan'ny rano (ohatra, bara ny rano, vovoka ary tohodrano fanodinam-bokatra), hitantanana ny fahatsentsenana ny làlan-tany fambolena kafe". Ny vondrona manam-pahaizana dimy hafa manam-pahaizana dimy dia nampiasa ny fitaovana amin'ny hetsika roa: 1) "Manangona haran-dranomasina ary manangana tobim-paritra miorina amin'ny akneola", ary 2) "Alefaso ny haran-dranomasina atsangana ao anaty akorandriaka". Natao ny hetsika, mifototra amin'ny fisian'ny manam-pahaizana amin'ireo faritra ireo, ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny fitantanana ny harato sy ny rano, ary ny fifanakalozan-kevitra amin'ny ekipa momba ny hetsika ataon'izy ireo. Marihina fa ny hetsika voalohany ny vatohara dia tafiditra ao amin'ny "tapaka henjana" fa ny faharoa dia tsy noho ny famaritana azy fa hahazo tombony amin'ny fananana fitsangatsanganana vatohara, izay tsy natao tamin'io fotoana io.
Ny hetsika manokana nodinihin'ireo vondrona manampahaizana tsirairay dia niova nandritra ireo fivoriana telo izay natao tamin'ny tsirairay. Ho an'ny vondron-jaza / famonoana haran-dranomasina, natao manokana sy ny toerana ny hetsika ho valin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny fivoriana teo aloha momba ny tanjon'ny fihoaram-boafatra izay misy fiantraikany amin'ny fomba hampiharana ny tetikasa. Ny hetsika natao nifanaovana tamin'ny fivoriana ara-potoam-piaramanidina farany dia: 1) "Manangona vatofotsy amin'ny fiparitahana any amin'ny tobim-paritry ny haran-dranomasina ao anaty akneary, ho fampiasa amin'ny tetikasa famerenana amin'ny vatohara hanatsarana ny fiarovana ny morontsiraka ary hampihenana ny fipoahan'ny morontsiraky ny Nosy Gilligan", ary 2) "Voan-tanimbary nanangana faty teo amin'ny Nosy Gilligan hanatsarana ny fiarovana ny morontsiraka sy hampihenana ny fitrandrahana amoron-tsiraka. Ny vondrona manam-pahaizana momba ny riandrano dia nifantoka tamin'ny firafitry ny fanodinana rano tao anaty riandrano iray (làlan-drano Fulladoza). Mitohy ny famakafakana ny dinika avy amin'ny "tapaka lalina".
Ireo singa an'ny Fitaovana Design Adaptation ampiasaina:
Asa atao 1: Eny
Asa atao 2: Amin'ny ampahany
Asa atao fanampiny 1: Eny
Asa atao fanampiny 2: efa mivoatra
Isan'ny hetsika dinihina:
"Potika mafy": hetsika 12
"Tapaka lalina": hetsika 3
Isan'ny mpandray anjara:
"Voahidy": mpandray anjara 1 lehibe, miaraka amin'ny fanampiana vitsivitsy
"Tapaka lalina": manam-pahaizana 4-5
Betsaka ny fahombiazana ho an'ity tetikasa ity. Ny tena haingana dia ny fahazoana ny tarika tetikasa hahafantatra bebe kokoa ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny drafi-pitantanana. Nahatanteraka izany tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny fampiasana ny Fitaovana Design miaraka amin'ireo planner misy rano ary ireo mpikambana hafa ao amin'ny ekipan'ny tetikasa. Ny fanondroana fahombiazana hafa dia mila tombanana amin'ny ho avy, ao anatin'izany: ny halavan'ny fandinihana izay nampidirina tao amin'ny drafi-pitantanana sy ny fahazoana ny vokarina avy amin'ny Fitaovana Design manohana ny fanovana ny fiovan'ny toetrandro mandritra ny vanim-potoana mifanentana ary manohana ny zava-bita momba ny tanjona fitantanana.
Lesona mianatra sy torohevitra
Rehefa miasa miaraka amin'ny takelaka manampahaizana ianao, dia makà antoka fa hanangona fotoana be dia be hampidirana ilay fitaovana sy ny rafi-pianarana. Mety ho adiny iray na hatramin'ny 90 minitra izany.
Rehefa miara-miasa amin'ny takelaka manampahaizana ianao dia manaova ny fiheverana ho tena voafaritra, na miomàna hanao azy ho voafaritra kokoa mandritra ny fifanakalozan-kevitra. Arakaraka ny fahazoana manokana ny hetsika fanombohana dia arakaraka ny hidiran'ny manam-pahaizana manokana ny hirotsaka an-tsehatra. Ny mombamomba manokana dia mety ho avy amin'ny tanjona, toerana, fotoana, sns.
Rehefa miara-miasa amin'ny takelaka manampahaizana, dia ilaina ny manana «tapaka henjana» ho azy ireo raha tokony hiasa, fa tsy ny tapakila tsy misy ilana azy.
Ny hetsika izay misy fiantraikany amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fihenjanana dia mety misy fidirana toy ny 1A. Na izany aza, mbola hisy ny hafa ny fidirana worksheet 1A satria hafa ny hetsika. Ny fampidirana atrikasa 1B dia ho hafa kokoa.
Miomàna hiverenana amin'ny hetsika efa vita nandritra ny "tapaka henjana" mba hanao fiovana fanampiny amin'izy ireo rehefa mihetsika ny hetsika vaovao.
Etazonia Misahana ny fiarovana ny tontolo iainana: Programan'ny fikarohana sy ny rivotra ary angovo
Masoivoho Amerikana miaro ny tontolo iainana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovana famolavolana fampifanarahana: torolàlana fampiasa, takelaka ary ohatra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovana famolavolana akora an-tserasera